एन्टिओक दिमितिचिकिच क्येंटिमेयर - शास्त्रीय युगको संस्कृतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आंकडा मध्ये एक (साहित्य को फूलहरु को सुधारहरु लेमोमोनोव) भन्दा पहिले। उहाँ एक पूर्ण विकसित विकास व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, न केवल साहित्यिक, तर पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो: तिनले क्याथरीन आई अन्तर्गत राजनयिक पदहरू राखे। उनीहरूको रचनात्मकता र जिज्ञासालाई थाहा पाउँथे।
एन्टिओक क्याटिमेयर: संक्षिप्त जीवनी
एन्टिओकस सन् 1908 मा रोमानिया जडहरूमा एक राजकुमार परिवारमा जन्मिएको थियो। उनको पिता, दिमित्री कन्स्टान्टिन्निभच, मोल्दोभियन प्रिंसिपल को शासक थिए, र उनको आमा, कासंद्रा, कोन्टाकुलस को प्राचीन र महान परिवार संग थियो। उनी जन्मेको र उनको पहिलो वर्ष Constantinople (वर्तमान इस्तांबुल) मा जन्मेका थिए र 1712 को वसन्तमा परिवारलाई साम्राज्य साम्राज्यमा सारियो।
परिवारमा एन्टिओकस क्यानाटेइर सबैभन्दा सानो थियो। त्यहाँ कुल6जना बच्चाहरू थिए:4छोरा र2छोरीहरू (मारिया, स्मारागाडा, मत्वे, सर्गेई, कन्स्टान्टेइन र एन्टिओकस)। सबैले अचम्मलाग्दो गृह शिक्षा पाएका थिए, तर केवल हाम्रो नायकले अवसरको फाइदा लिनुभयो र आफ्ना अध्ययनहरू ग्रीको-स्लाइस अकादमीमा जारी राख्नुभयो। ज्ञानको लागि उत्खनन र उत्साहको लागि धन्यबाद, प्रिन्स एन्टिओकस कैन्टेमिर 18 औं शताब्दीको सबैभन्दा प्रबुद्ध र उन्नत व्यक्ति हो!
स्नातक पछि, जवान एन्टिओकसले प्रिइन्जिनसेन्सी रेजिमेन्टमा सेवा प्रवेश गरे, र धेरै छोटो समयमा फर्काउने पद प्राप्त गरे। एउटै वर्ष (1726-1728) को समयमा उनले बर्नौली र ग्रसको विश्वविद्यालय अकादमी अफ साइंसेन्समा भाग लिइन्।
लेखकको पहिलो कार्य
लेखकको रचनात्मक मार्गको सुरुवात उन समाजमा भयो जब पीटर आई को सुधारहरु को निलंबन को लागी एक दर्दनाक प्रतिक्रिया थियो, उनी आफैले पेट्रिन किंवदंतियों को पालन गर्ने थिए, यसैले 1727 मा उनको फीफन प्रोकोपोविच को नेतृत्व मा एक समूह मा शामिल भए। उहाँका कामहरू यी सार्वजनिक मूडहरूद्वारा प्रभावित थिए।
उनको पहिलो कार्य बाइबिल पद र भजनसंग्रहको व्यावहारिक मार्गदर्शिकाको रूपमा लेखिएको थियो, उनीहरूलाई "भजनसंग्रहको सिम्फनी" भनिन्छ। 1726 मा उनले आफ्नो पांडुलिपि क्याथरीनमा सम्मान र सम्मानको चिन्हको रूपमा प्रस्तुत गरे। Tsaritsa आफ्नो कुरा धेरै धेरै मन पराउँथ्यो, र पांडुलिपि 1,000 भन्दा बढी प्रतिमा छापिएको थियो।
Cantemir को सबैभन्दा प्रसिद्ध पुस्तक
केही पछि पछि उहाँले विभिन्न विदेशी कामहरू अनुवाद गर्न थाल्नुभयो, अधिकतर - यी फ्रांसीसीबाट अनुवाद गरिन्छ। सबैभन्दा प्रसिद्ध काम, जसले उहाँलाई उत्कृष्ट अनुवादकको रूपमा पुष्टि गर्यो, फन्टेनलेको अनुवाद हो। एन्टिओकस कैन्टेमिरले "विश्वको विविधताको बारेमा वार्तालाप" को पुस्तक को एक सक्षम रेजिलेशन मात्र गरेन, तर प्रत्येक खण्डले आफ्नै विचार र टिप्पणीको साथ पनि पूरै गर्यो। धेरै युरोपेली देशहरूमा पुस्तकको सम्बन्धको बावजूद, रूसमा उनको लेखहरू इम्प्रेसले प्रतिबन्ध लगाएको थियो किनभने, कथित रूपमा, उनीहरूले नैतिकता र धर्मको आधारमा विरोध गरे।
एन्टिओकस Cantemir: काम को शनि
एन्टिओकस यस प्रकारका साहित्यको संस्थापक जस्तै सायद जस्तो लाग्छ। तिनको पहिलो संस्करणले विज्ञानको विच्छेदहरू प्रकट गर्यो। सबै भन्दा प्रसिद्ध कामहरूमध्ये "अपमानजनक शिक्षाहरूका लागि" आफ्नै आफ्नै मनमा, "यस काममा उहाँले विचलित रूपमा आफूलाई" बुद्धिमान पुरुषहरू "विचार गर्नेहरूलाई बुझाउँछन्, तर" तिनीहरूलाई Zlatoust मा बुझ्दैन। "
उनको सृजनात्मक गतिविधिको सबैभन्दा बढि बढ्दो 1727-1730 मा भयो। 1799 मा उनले सन्तुलनत्मक संस्करणहरु को एक श्रृंखला बनाए। कुल मा उनले9सहराई लेखे, यहाँ उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध हो:
"दुष्टहरूको महानिर्देशकहरूको ईर्ष्या" - महानगरीयहरूलाई मजाक गर्दछ, जसले आफ्नो वास्तविक सद्भाव गुमाउन र संस्कृतिको पछि लागेका छन्।
"मानव जुनूनको अंतरमा" - यो नोभोरोडको आर्कबिशपको लागि एक प्रकारको सन्देश थियो, जसमा सबै गन्ती र उच्च स्तरका चर्चित मन्त्रीहरूको जुनसुकै सम्बन्ध थियो।
"साँचो ब्वाईस" - यस काममा लेखक एन्टिओक दिमितिचिक कन्तमेइरले अस्तित्वको अनन्त प्रश्नहरूबारे जवाफ दिन्छन् र "केवल यो एक जीवनमा आशिष् दिइन्छ, जो कम छ र सन्तुष्टिमा रहन्छ।"
धेरै तरिकामा, राजकुमारको संवेदनात्मक काम उहाँका व्यक्तिगत प्रतिबद्धताहरूको कारण थियो। प्रिन्स एन्टिओकस कैन्टेमिर रसियालाई यति समर्पित थियो र रुसी मानिसहरूसँग प्रेम गरे कि उनको मुख्य लक्ष्य उनीहरूको भलाइको लागि सबै काम गर्न थाल्छन्। उहाँले पत्रुसका सबै सुधारहरूसँग सहानुभूति गर्नुभयो, र राजा आफैलाई अनन्तकालको प्रकाशको विकासमा आफ्नो प्रयासको लागि सम्मानित थियो। उहाँका सबै विचारहरू उहाँका कामहरूमा खुलेखित छन्। उनको कविता र भित्ताहरु को मुख्य विशेषता एक्सपोजर को नरमता मा छ, उनको काम असीमित छैन र महान पीटर I को धेरै उपक्रमहरु को गिरावट को बारे मा दुखद समानुभूति देखि भरा छ।
केही ध्यान दिन्छन् कि एन्टिओकस Cantemir, जसको जीवनी पनि राज्य गतिविधिहरु संग जोडिएको छ, केवल इंग्लैंड को राजदूत को अनुभव को लागि धन्यवाद को यस्तो गहन राजनीतिक शनिवार को निर्माण गर्न सक्षम थियो। त्यहाँ त्यहाँ थियो कि उनले राज्यको संरचनाको बारेमा महान ज्ञान पाए, महान पश्चिमी प्रकाशकहरूका कामका साथ परिचित भएको थियो: Horace, Juvenal, Boileau र फारसका कार्यहरूले उहाँका कामहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
एन्टिओकस कैन्टेमिरको राज्य गतिविधि
Cantemir एन्टिओक दिमित्रिचिक (जसको जीवनी रूसी साम्राज्य को इतिहास मा बारी बिंदुहरु संग निकटता संग अंतर छ) पीटर I को सुधार को समर्थक थियो, त्यसकारण 1731 मा उनले एक विधेयक को विरोध गरे जो कि राजाहरु को लागि राजनीतिक अधिकार को प्रस्तावित प्रस्ताव को विरोध गरे। तथापि, उनले इम्प्रेस अन्ना आइओनोभनाको पक्षलाई मजा लिइन्, तिनले धेरैले आफ्नो कामको वितरणमा योगदान दिए।
तिनको जवानीको बावजूद, एन्टिओकस क्यान्टेमर सार्वजनिक कार्यमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सफल भयो। यो उनीहरु थिए जसले इम्प्रेसनलाई उनको सही स्थानमा लिनको लागि जब बृहत परिषदको प्रतिनिधिले कोप्पलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनायो। एन्टिओकस क्यान्टेमिरले विभिन्न रैंक्सको अफिसर र अन्य कर्मचारीहरूको थुप्रै हस्ताक्षरहरू संकलन गरे, र त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा ट्रिप्सस्की र चेरकास्की सँग इमेजको महलमा गए। उनीहरूको सेवाका लागि, उदारताले पैसाको साथ स्वीकारे र इङ्गल्याण्डमा राजनयिक राजदूत नियुक्त गर्यो।
1732 को सुरुमा, 23 वर्षको उमेरमा तिनी एक राजनयिक निवासीको रूपमा सेवा गर्न लन्डन गए। भाषाको अज्ञानता र अनुभवको कमीको बावजूद, उनी रूसी साम्राज्यको हितको रक्षामा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम थिए। अंग्रेजी आफैले यसलाई ईमानदार र अत्यधिक नैतिक नीतिको रूपमा बोल्छन्। एक रोचक तथ्य: त्यो पश्चिमी देशको पहिलो रूसी राजदूत थियो।
इङ्गल्याण्डका राजदूतले उनलाई राम्रो राजनयिक विद्यालयको रूपमा सेवा गरे र लन्डनमा6वर्ष सेवा गरेपछि उनी फ्रान्समा फर्किए। उनले थुप्रै फ्रांसीसी पात्रोहरू: Maupertuis, Montesquieu, र अरूसँग राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्न सफल भए।
सन् 1735-1740 को रूसी-फ्रांसीसी सम्बन्धमा धेरै गाह्रो थियो, विभिन्न विरोधाभासहरू उत्पन्न भए, तर कन्टेमरको प्रयासको लागि धन्यवाद, शान्तिपूर्ण वार्तालापका कारण धेरै समस्याहरू समाधान भए।
सबै मा, उनले 150 काम लेखे, जसमा बीचमा उपजीव कविताहरू, भित्ताहरू, महाकाव्यहरू, अनुहारहरू र फ्रांसीसी भाषाबाट अनुवादहरू छन्। तिनीहरू यस दिन बाँचेका छन्, तर यसको प्रमुख अनुवादहरू हराएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले जान्न जान्थे कि तिनीहरू जान्छन्।
उदाहरणका लागि, फ्रांसीसी भाषामा रुचाइएका पाण्डुलिप्स एपिटिकेटस, फारसी अक्षरहरू र धेरै अन्य अनुवादहरूको भाग्य अझै अज्ञात छन्।
तिनका केही कामहरू एन्टिओक क्यान्टेमिरले खारिटन मक्केन्टिनको नाममा हस्ताक्षर गरे, जसको नाम र उपनाम हो। उहाँ आफ्नो काममा गर्व गर्नुहुन्थ्यो, तर उनीहरूले प्रकाश देख्नुभएन: व्यावहारिक रूपमा सबै पाण्डुलिपिहरूको पृष्ठ गुमाएका थिए।
उनको साहित्यिक सम्पदा एक भन्दा बढी र आधे सौ काम हो,9वाणीय संस्करणहरू,5गीतहरू (ओडे),6फलकहरू, 15 एग्रिग्रामहरू (जसलाई3"भनिन्छ" भनिन्छ "आफैका लेखक" र एक कामको तीन भागहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ), लगभग 50 अनुवादहरू, फ्रांसीसी भाषाबाट काम गर्ने 2-3 ठूला अनुवादहरू, जसका लेखहरू क्यानाटेयरका समकालीन थिए।
एन्टिओकले रूसी साहित्यलाई कस्तो योगदान दिए?
पुरानो रूसी र आधुनिक साहित्यको विकास र इतिहासको इतिहासमा यसको महत्व अधिकृत हुनु गाह्रो छ। आखिर, आफ्नो काममा उठाएका मुद्दाहरू यस दिनको लागि प्रासंगिक छन्: सरकारी अधिकारीहरूको अपील, अधिकारका अवैध कार्यहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू, आदि। सेन्टिरर यस प्रकारका साहित्यहरूको अग्रता सायद हो। एक प्रश्न उठ्न सक्छ: शीर्षक शीर्षक कसरी राजकुमार हुन सक्छ, र उहाँले किन सेतो लेख्नुभयो? यसको उत्तर उनको लेखनमा छ, जसमा उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ कि एक नागरिकको मात्र साँचो भावनाले उहाँलाई यस्तो भेला हुने नैतिक कार्यहरू लेख्न साहस दिन्छ। वैसे, "नागरिक" शब्द आफैलाई Cantemir द्वारा आविष्कार गरिएको थियो!
पेरिसमा भएको राजदूतले उनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो, जुन पहिले नै कमजोर थियो कि सानो छोटो रोगको कारण बचपनमा जन्मेका थिए। दुर्भाग्यवश, कान्टामेयरले लामो र दर्दनाक मृत्यु सहन गर्थे। उहाँ 37 वर्षको उमेरमा पेरिसमा मृत्यु भएको थियो। सेन्ट निकोलस ग्रीक मठ मा दफन, जो मास्को मा स्थित छ।
टाइटचेवको गीतमा दार्शनिक विषय: विश्लेषण। एफआई टाइटचेव: दार्शनिक गीत
Monino संग्रहालय। केन्द्रीय वायु सेना संग्रहालय
महिला लागि बुनना beret: चार्ट, सिफारिसहरू, फोटो
Pimps - यी नैतिकता सुझावको बिना मान्छे हो